Izindawo ezi-6 zemvelo zokuvakashela ngoNovemba | Bezzia
Izindawo ezi-6 zemvelo zokuvakashela ngoNovemba
UMaria vazquez | 29/09/2021 10:00 | Ukuzilibazisa, travel
Noma yisiphi isikhathi sonyaka kuhle ukuvakashela izindawo zemvelo esiziphakamisayo namhlanje, kepha lezi bathola umlingo okhethekile ngesikhathi sokuwa. Kungaba ngombala amaqabunga ezihlahla awutholayo noma ukuthi imifudlana yawo ikhula kanjani, u-Okthoba no-Novemba ethulwa njengezinyanga ezihamba phambili ukubaleka noma ukuvakasha ziboshwe ngalezi zindawo. Kodwa ziyini?
1 UCastañar wase-El Tiemblo
3 Ipaki yemvelo yendawo yentaba-mlilo iLa Garrotxa
4 Umzila wezihlahla zomnqumo eziyikhulu zaseMartos
6 I-Ambroz Valley
UCastañar wase-El Tiemblo
Ukuhlelwa kwe-El Castañar de el Tiemblo le ndawo kukuvumela ukuthi uhlole futhi wazi elinye lamahlathi amahle kakhulu futhi ayingqayizivele kusuka ezifundeni zaseValle del Alberche naseTierra de Pinares zaseCastilla y León. Isendaweni engamakhilomitha angama-90 ukusuka eMadrid, iba enye indlela enhle yohambo. Kangangokuthi eminyakeni ethile imikhawulo isetshenzisiwe ukuze kugwenywe ukwanda ngokweqile ezinyangeni zika-Okthoba noNovemba.
Ngaphandle kwesizini, umbala wale ndawo ebiyelwe ngokwemvelo kungenzeka ungashayi kangako kepha kuseseyindawo yokunqamula edolobheni. Ungathola kule ndawo imizila ehlukahlukene ongayijabulela wedwa noma nomndeni, noma kunjalo, isihlahla se-chestnut sase-El Tiemblo sithandwa kakhulu. Kuyinto eyodwa Umzila oyisiyingi wamakhilomitha angu-4,4 eqala endaweni yezokungcebeleka i-El Regajo bese iya ngasesihlahleni seminyaka eyikhulu se-chestnut «El abuelo», isihlahla se-chestnut esiyikhulu, esineminyaka engaphezu kwama-500 ubudala. Le ndlela icishe ibe yisicaba futhi ihlukaniswe njengelula, okwenza kube lula ukuhamba nezingane noma nabantu abanokuhamba okulinganiselwe.
ICañón del Río Lobos Natural Park iyi indawo yemvelo evikelwe yeCastilla y León. Imboza indawo engaphezu kwamahektha ayi-10.000 XNUMX phakathi kwezifundazwe zaseBurgos naseSoria futhi ivelele izindawo zayo ezinhle ezibazwe ngokuhamba kwesikhathi ngamanzi oMfula iLobos, indawo enhle yaseTemplar yaseSan Bartolomé, kanye nekoloni layo elibalulekile legriffon amanqe.
Epaki lemvelo kunezindlela ezahlukahlukene ezimakwe kahle ezikuvumela ukuthi wazi izindawo zayo ezihlukile nezindawo eziphila kuzo. Okutholakala kakhulu futhi kujwayelekile yi- hamba uye esifundeni saseSan Bartolomé. Ukusuka epaki yezimoto iValdecea kunamamitha ayi-1000 ukuya esplanade ye-hermitage, futhi ukwenza lo mzila unezinketho ezimbili. Ungalandela uMfula iNdlela, okubandakanya ukunqoba ubunzima obuthile njengokuwela umfula uwele amatshe okunyathela, noma ukuqhubeka nomkhondo wehlathi, uhambo olungenziwa ngisho nangezimbadada nabahamba ngezinyawo zabantwana.
Nawe unayo Imizila emide edlula eCanyon ngokuphelele. Akekho oletha ubunzima obukhulu ngaphezu kwesidingo sokunqoba umqansa oweqisayo noma uwele uMfula iChico, ovame ukoma kepha ongaba yisithiyo ngenkathi yemvula. Njengakwezinye izindawo zemvelo, ukuqala ngokubheka izimo esikhungweni semininingwane sabavakashi kuyisihluthulelo sokugwema isimanga.
Ipaki yemvelo yendawo yentaba-mlilo iLa Garrotxa
Ihlanganiswe ngaphezu kwe- Izigaxa zentaba-mlilo ezingamashumi amane nokugeleza kwamadlambi angamashumi amabili, leli paki linenani elikhulu lemvelo. Itholakala esifundeni saseGarrotxa, eGirona, i-orography yayo, inhlabathi nesimo sezulu sayo kuyinikeza uhlaza oluhlukahlukene, oluvame ukuthokoza, ngamahlathi e-holm oak, oki kanye namahlathi e-beech anenani elikhethekile le-landscape.
Ingenye yezindawo zemvelo ezinkulu kunazo zonke esiziphakamisayo namuhla. Ine Izindlela zabahamba ngezinyawo ezingama-25 yobude obuhlukile nobunzima obudlula ezindaweni ezithakazelisa kakhulu ePhikweni Lemvelo. Ngaphakathi kwepaki futhi ungavakashela i-hermitage ngaphakathi kwentaba-mlilo iSanta Margarita, isikhala semyuziyamu yeCoscat noma idolobha elidala laseSant Pau. Uzodinga impelasonto ukuze ukwazise konke.
Umzila wezihlahla zomnqumo eziyikhulu zaseMartos
Isihlahla somnqumo iMartos siseJaén, kumasipala wegama elifanayo lelo, elivikelwe yiDwala lalo, elibanikeza indawo eyi-microclimate nenhlabathi evundile kakhulu. Amahektha angaphezu kwama-20.000 XNUMX endawo kamasipala wawo anqotshwa yi-monoculture yesihlahla somnqumo futhi, ikakhulukazi, ngobuhle obubonakalayo izihlahla zomnqumo ezibabazekayo.
Umzila wezihlahla zomnqumo wekhulu leminyaka uhlanganisa indawo engamahektare angama-84, nezihlahla ezingama-5.394 zizonke, ezinye zazo, imifanekiso ebaziwe yangempela. Ngaphezu kwe-60% yalokhu indala kuneminyaka engama-200, yize isiko lomlomo likhombisile ukuthi izihlahla zomnqumo ze Indawo yeLlano de Motril bangaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka ubudala.
I-enclave itholakala ngaphezu kwekhilomitha ukusuka enkabeni yedolobha laseMarte, eduze komgwaqo oxhuma iMartos neSantiago de Calatrava (J-213). Ku-kilometre 1,3 uzothola isibonakaliso sokuqala se-Centennial Olive Trees futhi, lapho nje udlula izakhiwo ezithile zezolimo, uzothola inkomba yesibili.
Emngceleni ophakathi kweBurgos nezwe laseBasque yi impophoma ephakeme kunayo yonke enhlonhlweni: impophoma yeNervión. Le mpophoma enkulu yamamitha angu-270 obude osendaweni evikelekile yaseMonte de Santiago, ingumbukwane wemvelo esingenakuwujabulela njalo.
Ubuhle beSalto del Nervión busemanzini kodwa kuphela izinyanga ezimbili kuphela ngonyaka esingabucabanga ngale ndlela. Lapho isebenza endaweni yekarst, ayihlali inamanzi ngoba iyangena futhi igeleze engxenyeni engezansi yomhosha i-Delica. Ngakho-ke kunconywa uyivakashele ngemuva kwezinsuku zemvula enamandla, isiphepho esinamandla noma ukuncibilika.
Kunezindlela ezintathu zokujabulela impophoma yeNervión. Ukusuka eBurgos ungafinyelela kakhulu elula futhi ekahle yokwenza nezingane. Kumakhilomitha amabili nje vo ngezinyawo uzofika endaweni yokubuka emangalisayo lapho le mpophoma ebabazekayo ingabonakala khona ukuthi iyagijima. Enye indlela yokubona impophoma yeNervión isuka phezulu iyona eqala edolobheni lase-Untzaga esifundazweni sase-Alava. Uma lokhu ofuna ukukwenza kungukuzivocavoca umzimba kancane futhi ucabangisisa ngempophoma yeNervión nayo yonke indawo ekhangayo yaseDelika canyon kusuka kolunye uhlangothi, nansi indlela ekahle.
Ezigodini ezisenyakatho yeCáceres, e isifunda esizungeze iHervás, ibanjwa njalo ekwindla phakathi kuka-Okthoba noDisemba iMagical Autumn, okuyisinyathelo esenza injabulo yokujabulela imvelo nezintelezi zasemakhaya zale ndawo zihehe nakakhulu. Ngakho-ke, kungenye yezindawo zemvelo esikhethe ukuvakashela kuzo ngoNovemba.
Ekwindla ngomlingo Sikunikeza ukuthi uphefumule ekwindla ngemizila yamabhayisikili, izintaba, imisebenzi yamanzi nemijaho yezintaba, uvuselele izinzwa zakho ngomculo futhi uthole ukunambitheka kwendabuko ngamasampula we-gastronomic. Maduze uzokwazi ukubheka yonke imisebenzi ekuwebhusayithi ye-Ambroz Valley.
Awufuni ukuya ohambweni noma ulungiselele ukuphunyuka emaphandleni kwenye yalezi zindawo zemvelo?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Ukuzilibazisa » Izindawo ezi-6 zemvelo zokuvakashela ngoNovemba
Ungazigwema kanjani izindleko ezingalindelekile emnothweni wasekhaya
Okhiye bokusebenzisa ngokunenzuzo isikhathi esikhululekile njengabashadikazi